सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराध | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराध
on: २२ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०४:५७ लेख | दृष्टिकोण
सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराध
कुनै पनि समाजका लागि अपराध स्वीकार्य हुँदैन । जटिल खालको आर्थिक अपराध अन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराध रहेको हुन्छ । स्रोत नखुलेको, अवैध तरीकाले आर्जन गरिएको, करको दायरा नसमेटिएको, अपराधिक तरीकाले आर्जन गरिएको अकुत सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाई कानूनको दायरामा ल्याउन, व्यक्ति, समूह वा संगठनले अपनाउने कृत्रिम तरीका, प्रक्रिया वा विधि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण गलत मनसाय वा कार्यबाट कमाइएको पैसालाई वैध गराउने गतिविधिबाट शुरू हुन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधको इतिहास हेर्दा यो अपराधको शुरुआत दोस्रो विश्वयुद्धताका अमेरिकी सैनिकहरूले अवैध तरीकाले रक्सीको व्यापार र जुवा खेलर, खेलाएर प्राप्त गरेको सम्पत्ति स्वीस बैंकमा राखेको र पछि त्यसलाई वैधता गराउने उपाक्रममा गरिएका शृंखलाबद्ध आपराधिक गतिविधिबाट शुरुआत भएको मानिन्छ । पछिल्लो समय यो अपराध र यसका प्रवृत्तिबारे विश्वव्यापी रूपमा चर्चा परिचर्चा हुने गरेका छन् । यो खालको अपराध नियन्त्रण गर्न विश्वभरि विभिन्न राष्ट्रले नयाँनयाँ कानूनी र विभिन्न संयन्त्र विकास गर्दै आएका छन् । अपराध सँगसँगै आतंकवादमा वित्तीय लगानीको विषय पनि जोडेर आउँछ ।
यो अपराध कुनै निश्चित, भूगोल वर्ग वा राज्यमा मात्र सीमित छैन । यो अपराध गर्न अपराधीले हिंसात्मक गतिविधि अनिवार्य प्रयोग गर्न जरुरी हुँदैन । त्यसैले निगरानीको सवालमा पनि जटिलता हुन्छन् । अपराधिले पूरै देशको आर्थिक क्षेत्रलाई नै उपयोग गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्दिनसम्म सक्छ । यो अपराधले आर्थिक स्थायित्व ध्वस्त पार्ने क्षमता राख्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र ज्यादा भएको देशमा यस्तो खालको अपराधको दर पनि उच्च रहने गर्छ । यो अपराध एक जटिल अपराध किन पनि हो भने यो अपराध सँगसँगै भ्रष्टाचार, घूसखोरी, लागूऔषधको ओसारपसार, चेलीबेटी बेचबिखन, तस्करी, कर तथा राजस्व छली, अपहरणजस्ता तमाम अपराधहरू पनि सँगसँगै भइराखेका हुन्छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराध चरणगत रूपमा गरिने अपराध हो । रूपान्तरणको पहिलो चरण हो । यो चरणमा पैसा वा रकमलाई आर्थिक गतिविधिमा प्रवेश गराइन्छ । अवैध धनलाई विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापमा लगानी गर्ने, घर जग्गा खरीद गर्ने, बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्ने, मुद्रा परिवर्तन गर्नेजस्ता कार्य हुन्छन् । दोस्रो चरणमा प्रायः चल सम्पत्तिलाई विभिन्न व्यावसायिक कारोबारमा पुनः लगानी गरिन्छ । यसका लागि रकमको वास्तविक स्रोत लुकाउने रकमलाई शेयर, चेक, ट्राभलर वा गलत, फर्जी कागजतपत्र तयार गर्ने, गलत सम्पत्तिबाट किनेको वस्तुलाई पुनः विक्रीमा राख्ने जस्ता कार्य गरिन्छन् ।
तेस्रो चरणमा वैध र अवैध सम्पत्तिलाई एकै ठाउँमा एकाकार गर्ने, अचल सम्पत्तिको खरीदमा जोड दिने र विदेशी बैंक वा कम्पनीमा लगानी गर्ने आदि गरिन्छ । अपराधबाट धन आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ अपराधमा संलग्न हुने र आपराधिक आर्जनलाई विभिन्न बहाना वा स्वरूपमा कानूनी आर्जनका रूपमा प्रयोग गर्न त्यस्ता अपराधीहरूले पुनः गर्ने अर्का अपराध नै सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराध हो ।
नेपाल आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक र राजनीतिक रूपमा अन्योल, अस्पष्ट र कमजोर रहँदै आएकै छ । देशमा हाल सबै क्षेत्रप्रति जनविश्वास घट्दै गएको छ । छलकपट, ठगी र अपराध प्रवृत्ति दिनदिनै बढ्दै गएको छ । पद, पैसा र पहुँचको आधारमा जे गर्न पनि सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापना गरिँदै छ । कानूनको शासन र जवाफदेहिताको संस्कृति विस्तारै कमजोर बनाउँदै लगिएको छ । मेहनत गरेर कमाउने भन्दा पनि रातारात कसरी धनी बन्न सकिन्छ भन्ने सोच बढ्दै गएको देखिन्छ । २०६२/६३ पछि नेपालमा केही व्यापारी र नेताहरू अस्वाभाविक रूपमा धनी बन्दै गएको देखिन्छ । सो समयभन्दा अगाडि बैंकको कालो सूचीमा समावेश गरिएका मानिस १ दशक भित्रैमा कसरी करोडपति बने ? देशको आर्थिक स्वास्थ्य आरोलो लाग्दै जानु र केही मानिस भने अस्वाभाविक रूपमा धनी बनदै जानु कसरी सम्भव हुन्छ ? नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधको अवस्था कति पेचिलो र जेलिएको छ बुभ्mनलाई यस्ता प्रश्नबाट थाहा लाग्न सक्दछ । केही समय अगाडि खोज पत्रकार केन्द्रले नेपाल लिक्स नामक एउटा रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो, जसमा कसरी कर छल्न र धन थुपार्न नेपालको कमजोर कानूनी र सुरक्षा व्यवस्थाको उपयोग गरिएको छ भन्ने सन्दर्भ आएको थियो ।
राज्यका कुनै पनि निकायले यो अपराध रोकथामका लागि ठोस पहल गर्न खोजिरहेका छैनन् । कानूनका रूपमा सम्पत्त शुद्धीकरण ऐन र नियमावली भएको भए पनि यसको कार्यान्वयनमो तदारुकता कम छ । अहिलेको समयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सतर्कता अपनाउने हेतुले केही महŒवपूर्ण निकाय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मातहत राखेको भए पनि यसबाट भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराध नियन्त्रण गरिनेछ भन्ने विश्वास कतै देखिँदैन । पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको अवस्था स्थानीय तहसम्म पनि झन् व्यवस्थित बन्दै गएको भन्ने रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन् भने स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै सम्पत्ति शुद्धीकरण बारे विवादस्पद बयान दिएका छन् ।
अस्पष्ट कर प्रणालीले पनि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराध वृद्धि गर्न मद्दत पुगेको देखिन्छ । यस्तै नेपालमा वर्तमान समयमा संगठित अपराधको प्रकृतिमा निरन्तर वृद्धि भइराखेको छ । संगठित अपराधको ज्यादा बोलवाल भएको समाजमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधको अवस्था निकै भयावह हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको प्रावधान अनुसार नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराध नियन्त्रण गर्ने केही संयन्त्रहरू पनि निर्माण गरिएका छन्, जसमा समन्वय समिति पनि पर्दछ । यसको मुख्य काम सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अपराधको नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा अन्तर निकायबीच समन्वय गर्ने रहेको छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अवधारणा पनि विकसित गरिएको छ । विभिन्न मुलुकले सम्बद्ध अधिकारीलाई दिने, सम्बद्ध निकाय, बैंकिङ वा वित्तीय वा गैरवित्तीय संस्थाका सम्बद्ध पदाधिकारीसँग सोधपुछ, बयान गर्नेजस्ता काम यो विभागले गर्ने भनिएको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधको प्रकृतिमा धेरै परिवर्तन देखिन थालेको छ । सरकारले यो अपराध र यसको असरप्रति गाम्भीर्य देखाई यस्ता अपराध नियन्त्रणमा तदारूकता देखाउन जरुरी भइसकेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका
२० चैत्र २०७५, बुधबार ०६:३१
२१ माघ २०७५, सोमबार ०५:०५